प्लस टु क्रिकेट : हिमालयन ह्वाईट हाउस सेमिफाईनलमा Letzcricket - Serving Nepali Cricket
प्लस टु क्रिकेट : हिमालयन ह्वाईट हाउस सेमिफाईनलमा
30th March 2019, Saturday
नेक्सस क्रिकेट एकेडेमीको आयोजनामा काठमाण्डौको मुलपानी क्रिकेट मैदानमा संचालित अस स्टडीज प्लस टु टि ट्वान्टी क्रिकेट लिग को दशौ दिनको पहिलो खेल हिमालयन ह्वाईट हाउस कलेजले जुद्ध उच्च मा.बि. रौतहट लाई ३५ रनले पराजित गर्दै सेमिफाईनल पुगेको छ भने ब्लुबर्ड कलेज ले निस्ट कलेज लाई २४ रनले पराजित गरेको छ ।
शनिबार सम्पन्न पहिलो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको हिमालयन ह्वाईट हाउसले निर्धारित २० ओभर खेल्दै ८ विकेटको क्षेतीमा १३६ रन बनाएको थियो । ह्वाईट हाउसका अनुज रोक्काले ३१, सुशान्त सिह २०, आयुष बस्नेत १७ र आश्रय बस्नेतले १८ रन बनाएका थिए ।
बलिङ तर्फ निस्ट कलेजका राजेश यादव र सुभम गुप्ताले समान २÷२ वीकेट लिएका थिए ।
जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको जुद्ध उच्च मा.बि. रौतहटले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउदै १०१ रन बनाएको थियो । रौतहटका बिसन जैसवालले २७ रन र सुभम याददवले १८ रन बनाएका थिए । बलिङ तर्फ ह्वाईट हाउसका म्यान अफ द म्याच घोषित आरियो पौडेलले ४ विकेट लिएका थिए भने निस्चल रन्जीत,सुशान्त सिह र आश्रय बस्नेत ले समान १÷१ विकेट लिएका थिए ।
दोस्रो खेल ब्लुबर्ड कलेज २४ रनले बिजयी
शनिबारै सम्पन्न दोस्रो खेलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको ब्लुबर्ड कलेजले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउदै १५४ रन बनाएको थियो । ब्लुबर्डका निर्भिक पाठकले ३० रन, दुरौस थापा र संकर पौडेलले समान २५÷२५ बनाएका थिए ।
बलिङ तर्फ निस्टका युनिस बिक्रम सिह ले ३ विकेट लिएका थिए भने सन्जय बोहोरा, सागर थापा र रितिक शाह ले समान १÷१ विकेट लिएका थिए भने समिर सेनले २ विकेट लिएका थिए ।
लक्ष्य पच्छया्उदै जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको निस्ट कलेजले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउदै १३० रन बनाएकोे थियो । निस्टका लागि दिपेन्द्र प्रजापति ले ३७ रन र बिजेन्द्र लाल ले १९ रन बनाएका थिए ।
बलिङ तर्फ ब्लुबर्डका म्यान अफ द म्याच घोषित संकर पौडेलले ३ विकेट लिएका थिए ।